Ogaden News Agency (ONA) – Gud. Hogaanka Warfaafinta oo la kulmay culumada xaramka iyo jaaliyadda Jiddah
Gud. Hogaanka Warfaafinta oo la kulmay culumada xaramka iyo jaaliyadda Jiddah
Posted by ONA Admin	/ May 31, 2014
Hogaanka Wrafaafinta JWXO oo gudashada Cimrada u tagay laba magaalo ee Barakaysan – Madina iyo Makka – ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah culumada xaramka iyo jaaliyadda Jidda. Kulankan oo ahaa kala warqaadasho iyo dardaaran iyo isu-nasteexayn ayay culumada kaga warbixiyeen masuuliyadda looga baahan yahay maanta umadda Ogadenya ku nool iyo guud ahaan umadda Somaliyeed. Waxay sheegeen culumadan in masuuliyadda 1aad ee saaran ay tahay inay fahmaan in jihaadka lagula jiro gumaysiga Itobiya uu yahay Faradul-Cayn taasoo ah bay yidhhahdeen waajib kaga dhigaysa qofkasta oo halkaa ku nool inuu dagaalkaa ka qayb qaato.
Waxay sheegeen inuusan qofna ka daahsoonayn in dalka iyo diintaba lagu soo duulay, oo dhul muslim leeyahay xoog lagu qaatay, iyadoo la laynayo dadkii dalka lahaa oon loo kala aaba yeelin caruur, wayeel iyo dumar toona. Waxay intaa raaciyeen in kooxdii uu Ibraahim Dheere madaxda u ahaa ay ku dheceen khalad diini iyo mid taariikhi ah markay isu dhiibeen cadawgoodii iyagoon kala tashan culumada talaabadaa ay qaadeen, kana diiday talooyikii ay siiyeen culamada rabaaniga ah ee arintaa u arkayay sida ay diinta qabto.
Xubna ka mid ah jaaliydda Jidda ayuu ka dib la kulmay Gudoomiyaha Warfaafinta halkaasoo uu uga xogwaramay xaaladda halganka uu ku sugan yahay. Wuxuu Gud. Warfaafinta sheegay in marxaladaha halganada ay soo maraan midkii ugu dambeeyay ee hanashada guusha la marayo, waana meesha ay halganadeenii hore ka dheelin jireen sida uu u dhigay Hogaanka. Marxaladdan waa marka kooxaha daahsada guusha iyo kuwa u arka in la gaadhay markii la guran lahaa midhaha Halgankii dheeraa ee lasoo maray ay u kala horeeyaan la gorgortanka gumaysiga. Wuxuu kaloo Gudoomiyaha HWF sheegay in marxaladdan uu gumaysiga xoogiisa isugu geeyo dhibaateynta shacabka say uga quustaan guusha ama halgamaaga ugu dalbaan in la joojiyo halganka. Ugu dambayntii wuxuu Gud. HWF u mahadnaqay jaaliyadda Sacuudiga guud ahaan oo kaalin muuqata kaga jirta halganka, isagoo sheegay inay hormuud u yihiin jaaliyadaha caalamka.
Xubnaha jaaliyadda oo arimahaa ka hadlay ayaa ka warbixiyay xaaladda ka jirta gudaha iyo dhibaatada ay ciidanka Itobiya ku hayaan dadka shacabka ah een waxba galabsan iyagoo adeegsanaya dhalinyaro uu Cabdi iley soo ururiyay. Sheekha jaaliyadda Sh. Axmad oo arimahaa aad uga hadlay ayaa sheegay inuu Cabdi iley ka xunyahay Fircoonkii loo diray Nabi Muuse CS, sababtoo ah buu yidhi Fircoon wuxuu noo sheegay Ilaahay inuu Raggana layn jirya Haweenkana ka xishoon jiray isagoo yidhi – نذبح أبنائهم ونستحيي نسائهم – Hasa Cabdi Iley wuxuu kaga bilaabay haweenkii laynta iyaga ayuuna ugu dhibaata badan yahay. Wuxuu kaloo sheegay Sh. Axmad in waajibaadka qofka halgamaya saaran ay tahay inuu halganka wado intuu noolyahay, guushana Ilaahay ayay ku xidhan tahay waqtiga la helayo ee mid isaga u taala ma’aha. Waa inuu ku talagalo labada guul midkood inuu helo النصر أو الشهادة .. haduusan labadaa ku talagalin oo aanu u diyaar noqonin, uma sii adkaysan karo halganka.
Ugu dambayntii, waxay jaaliyadda iyo Hogaanka Warfaafinta isku raaceen in loo midoobo halganka oo aan loo dabcin dhibaatada gumaysiga.
War-qoris xumaa ONLF na! Hoggaanku miyaanu magac lahayn?